I-Cute Cabin 2 blocks ukusuka ogwini, 4 ukusuka maphakathi - I-Airbnb
I-Cute Cabin 2 blocks ukusuka ogwini, 4 ukusuka maphakathi
Ikhabethe lamapulangwe, elenziwe ngokhuni lwasendaweni liyingxenye ye-Cabañas Lobotepe (nezinye izinketho zokuqasha isikhashana nesikhathi eside), indawo esondelene yasegqumeni eduze nendawo yokudoba iSan Juan del Sur. Ikhabethe lingu-35m2 futhi lihlanganisa indawo yokulala, indawo yokupheka, indlu yokugezela kanye nethala elincane eliseduze nomgwaqo. Phezulu endaweni unamasimu anokubukwa kwe-bay!
Kungamabhulokhi ama-2 kuphela echwebeni kanye namabhulokhi ama-4 ukuya endaweni yedolobha. Kukhona indawo yokupaka yangasese kanye nomnakekeli.
Le khabhinethi itholakala endaweni (enezinye izinketho zokuqasha isikhashana nesikhathi eside) esingaba ngu-3000m2 enengadi egcwele izihlahla zezithelo (amalamula, amawolintshi, omango) nezihlahla zokhuni oluqinile. Inamathafa omphakathi angu-2 anendawo yokosa inyama kanye nokubukwa okuhle kwetheku. Ukwengeza, sinendawo yokupaka izimoto eziyisi-6, isikhathi esiningi phakathi kwasemini nasebusuku kukhona abanakekeli.
I-Cabañas Lobolira itholakala endaweni yabadobi ngemuva kwamatheku ohlangothini oluseningizimu yeTheku. Amabhulokhi angu-2 nje ukusuka ethekwini laseSan Juan del Sur kanye namanye ama-200m ukuya endaweni yokudlela ogwini. Abantu bakulo makhelwane banobungane kakhulu futhi bahlala ngaphandle (sicela ucabangele ukuthi ungezwa umsindo othile emgwaqweni emini nakusihlwa). Uzothola izitolo ezincane phakathi kwama-50m lapho ungathenga khona ukudla kwakho okuyisisekelo neziphuzo ngisho nezinhlanzi ezintsha! Ukufinyelela kalula usuka enkabeni yedolobha ngezinyawo nangemoto, emini nasebusuku.